Handeha hamonjy fodiana eny Manjaka Ilafy izy mianaka ireto saingy noho ny fahateren’ny taksibe ao amin’ny zotra 126 dia voatery nandeha tamin’io zotra voalaza etsy ambony io, kinanjo loza no nitranga. Araka ny fitantaran’ny fianakavian’ity renim-pianakaviana very zanaka ity dia vehivavy no niara-nipetraka tamin’izy mianaka. Nilaza ity farany fa mahafatifaty azy tokoa ilay zaza ka minitra vitsy taorian’izay dia tsy nahatsiaro tena intsony ilay reniny. Nalainy mora foana ilay zaza izay tsy nisy nahatsikaritra ihany koa, hany ka tsy hita koa izay toerana nialany. Ilay renim-pianakaviana tompon-janaka kosa taorian’izay efa tonga teny amin’ny faran’ity taksibe ity eny Analamahitsy vao notairin’ilay resevera satria renoky ny torimaso tanteraka. Verivery saina izy nandritra izany ka olona sendra nangoraka azy no niantso an-telefaonina ireo fianakaviany ary nanatitra azy tany an-tokantranony. Ny sabotsy hariva teo, efa nanomboka niverina ny sainy ka nahatsiarovany ireo tranga rehetra niainany ireo sy ny nahavery ilay menaky ny ainy. Tsy mbola hita ilay zazavavy kely hatramin’ny fotoana nanoratanay.